Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Faqi ayaa beeniyay in dowlada Soomaaliya ay beenisay warar sheegaya in la bedelay qareenadii difaacaysay dacwada badda oo ay ku jirto Muno Sharmaan.
Dowlada Soomaaliya oo soo dhoweysay baaritaanka dilkii Jamal Khashoggi
Qoraal ka soo baxay Wasaarada Arrimaha Dibbada dowlada Federalka ayaa lagu sheegay in Dowlada Soomaaliya ay soo dhoweyneyso baaritaanka ay Boqortoyada Sacudi Carabiya ee dilkii Jamal Khashoggi.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo faah faahin ka bixisay go’aanka laga qaatay Xiisada Khaliijka
Sagal Radio Services • News Report • September 24, 2017
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa markii u horeysay faah faahin ka bixisay go’aankii dhex dhexaadnimada ahaa ee dowladda ka qaadatay xiisada khaliijka iyo habka loo maray.
Dowlada Soomaaliya oo la wareegtay qalab loo isticmaalo duulista hawada oo ay leedahay hay’ada ICAO
Madaxweyne Farmaajo oo safarkii 5aad maanta dalka uga ambabaxaya (Dalkee ayuu booqanayaa)
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta uu u ambabaxo dalka Turkiga, kaddib markii uu casuumaad rasmi ah uu ka helay dhiggiisa Turkiga Recep Tayyib Erdogan.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo booqasho rasmi ah ku tagi doono.
Sagal Radio Services • News Report • February 5, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha dowladdiisa loo jeediyo oo ahaa in dhulal dan guud ah lagu wareejiyay shaqsiyaad iyo hey’ado gaar ah.
Madaxweynaha oo ammaanay hawlkarnimada iyo anshaxa ciidanka kumandooska (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya ahna Taliyaha Guud ee Ciidammada Qalabka Sida Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagey xerada ciidamada gaarka ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee degaanka Balli Doogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxweynaha oo jeediyay khudbad u muuqatay tii u dambeysay ka hor doorashada soo socota
Sagal Radio Services • News Report • July 5, 2016
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaanayo ahna Musharax mar kale u taagan xilka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay Telefishinka Qaranka ee SNTV, isagoo kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin doorashada soo socota iyo waxqabadka dowladdiisa mudadii afarta sano.
Madaxweynaha oo mar kale magacaabay Guddiga doorashooyinka 2016
Sagal Radio Services • News Report • June 30, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale soo magacaabay Guddiga Doorashooyinka Qaranka, kadib markii lagu diiday Guddigii uu soo magacaabay laba todobaad ka hor.
-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer ka soo saaray magacaabista Guddiga Heer Federaal ee Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee sannadka 2016-ka.
Dowladda Soomaaliya oo balan qaaday in dibadda loo qaadayo Wariye C/risaaq Blac
Dowladda Soomaaliya ayaa balan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dibadda loogu qaadi doono Wariye C/risaaq Cilmi Black oo kol hore ku dhaawacmay rasaas dabley hubeysan ku fureen, xilli uu ku sugnaa hoygiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeyb galaya shir ka furmaya Turkiga
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeyb galaya shir looga hadlayo arrimaha gargaarka Caalamiga oo maanta ka furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Soomaaliya oo ka qeyb galeysa Shirka Caalamiga ee Arrimaha Bani’aadnimada ee Istanbul
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay Kuxigeenka Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay , ahna Isku-Duwaha Hawlaha Gargaarka Aadaminimo ee Soomaaliya, Peter De Clecq.
Xasan Sheekh “Doorashada soo socota waxaa la imaan doonaa ajande cusub, si la mid ah lixdii Tiir”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka Madaxweynaha, isagoo ka dhawaajiyay in doorashada soo socota uu la imaan doono ajande cusub oo uu uga qeyb qaadanayo tartanka doorashada.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka codsaday Golaha Ammaanka inay qaadaan cunaqabateynta hubka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warbixin siinayay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa uu kaga hadlay horumaradii ay gaartay dowladdiisa afartii sano ee la soo dhaafay, sida Amniga, siyaasada iyo hirgelinta Federaalka.
Madaxweynaha: “Suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay naftooda u hureen dib u dhiska iyo nabadda Soomaaliya’’
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa hambalyo u diray madaxda iyo hawlwadeenada Wasaaradda Warfaafinta, munaasabadda sannadguuradii 5-aad ee ka soo wareegtay dib u hawlgelinta televishanka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV.
Madaxweynaha Soomaaliya oo u hambalyeeyay ciidanka maamulka Puntland
Sagal Radio Services • News Report • March 24, 2016
Madaxweynaha oo ka hadlay xuquuqda ay helaan Ciidamada dowladda
Sagal Radio Services • News Report • March 6, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay si toos ah u helaan xuquuqdooda, isagoo meesha ka saaray in aanay jirin askari aan helin mushaar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo Baajiyay Safar uu ku Tegi lahaa Waddanka Sweden
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud ayaa baajiyay Safar uu ku tegi lahaa Dalka Sweden, kaddib shirkii Waddamada Ciidamadu ka joogaan Somalia ee ka dhacay Dalka Jabuuti, sida lagu sheegay War-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Somalia.
NATIIJO FIICAN: Wiilasha 11,jirada Soomaliya oo tartamka carruurta ee Jem Cup wacdaro ku dhigay Qatar
Xiddigaha 11-jirada soomalida ayaa soo laabashada qeybta labaad lasoo galay dar dar waxaana ay dhaliyeen goolka bar baraha,waxayna ciyaarta ka dhigeen 2-2.
Madaxweynaha oo maanta hortagaya Golaha Baarlamaanka, si uu Khudbad ugu jeediyo
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu wadaa inuu hortago Golaha Baarlamaanka Federaalka, iyadoo Guddoonka Baarlamaanka uu ku dhawaaqay in fadhi aan caadi aheyn maanta yeelanayaan.
Madaxweyne Xasan oo shir-guddoomiyay kulan looga hadlayay Colaadda Dalka Burundi (SAWIRRO)
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shir-guddoomiyay shir gaar ah oo looga hadlayay xaaladda dalka Burundi, kaasoo ay kasoo qayb-galeen taliska ciidamada Deg-dega ah ee Bariga Afrika.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta Nairobi uga qeybgalaya baroordiiq loo sameynayo askartii lagu diley Ceelcadde
Madaxweynaha oo sheegay in Caafimaad dibadda loo qaadayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii Liido
Sagal Radio Services • News Report • January 23, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gelinkii dambe tagay Xeebta Liido, kadib weerarkii habeen hore ku qaadeen Al-Shabaab, ayaa sheegay in dowladda ay xil iska saari doonto sidii dadkii ku dhaawacmay weerarkii Xeebta Liido oo aan dalka wax loogu qaban karin in dibada loo qaado.
Madaxweynaha oo kulankii u horeeyay la yeeshay Ergeyga cusub ee Qaramada Midoobey (Sawirro)
Madaxweyne Xasan Sheekh oo saaka lagu wado inuu gaaro magaalada Jowhar
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda gaaro magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ammaanay doorkii Nicholas Kay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay doorkii wanaagsanaa ee uu dalka ka geystey Mr Nicholas Kay, Wakiilkii waqtigiisa dhammaaday ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha “Soomaaliya halkan waxaa dhigay siyaasad xumo, hadaan siyaasada la hagaajin….”
Sagal Radio Services • News Report • December 10, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in bur burkii dalka uu sabab u ahaa siyaasad xumo, isagoo ka dhawaajiyay inay salka u dhigi doonaan nidaam iyo dhaqan dowladnimo, si berri madaxda ka dambeeya ay miraheeda u gurtaan.
Sagal Radio Services • News Report • October 5, 2015
Waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya qaban qaabada shirka wada tashiga hanaanka doorasho iyo aayaha siyaasadeed ee Soomaaliya sanadka 2016, iyadoo shirkan uu furmayo 20-ka bishan oo ku beegan maalinta berri oo Axad ah.
Warar sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh uu hortagi doono Baarlamaanka
Madaxweynaha “Fursado badan ayaa naga lumay oo aheyd inaan ka faa’ideysano”
Hey’adda Nabadsugida oo la wareegtay guri ku yaalla degmada Kaaraan
Baarlamaanka Soomaaliya oo dhaarinayo Guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha
Kulan uu maanta yeelanayo baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu dhaariyo guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha kuwaasoo dhowaan uu baarlamaanku ansixiyay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo shacabka kula ciiday xeebta Liido(Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kumanaan shacab ah kula ciiday goobo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha oo munaasabadda Ciiddul Fidriga awgeed cafis u fidiyey maxaabiis ku xirneyd Xabsiga
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabbad Ciidul Fidriga awgeed cafis u fidiyey 79 maxaabiis oo dambiyo kala duwan ugu xirnaa xabsiyada Dhexe.
Digreeto Madaxweyne oo lagu magacaabay xisaabiyaha guud ee Qaranka
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyey in dowladdiisa ay ka go’an tahay in dalka ay doorasho ka dhacdo sannadka 2016, isla markaana la dardar-gelinayo hawlaha la xiriira fulinta barnaamijyada Hiigsiga 2016.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo ku aaddan bisha barakeysan ee Ramadaan u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo Muslimiinta caalamka.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta la hor-geynayo sharciga Saxaafada
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta la hor-geynayaa sharciga Saxaafada, kaasoo horay u soo ansixiyeen Golaha Wasiiradda.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo ka hadlay xiisada ka dhalatay baarlamaanka kalsoonida waayay ee Jubaland
Daawo Sawirada Booqashadii Madaxweynaha uu ku tagay deegaano ka tirsan Sh/Hoose
Sagal Radio Services • News Report • May 27, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya ahna Taliyaha Guud ee Ciidammada Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta booqdey saldhigyada Ciidamada Xoogga Dalka ee ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo uu kula kulmey qaar ka mid ah ciidamada degaannadaasi ka hawlgala.
Golaha Wasiirada oo go’aamo cad cad ka soo saaray Shirkadaha dhex degan Garoonka diyaaradaha
Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo maanta isugu yimid kulankoodii caadiga ahaa ayaa looga hadlay arrinta Baarlamaanka Jubaland, Qaxootiga Yemen, Tala soo jeedin ku aadan shirkadaha degan Garoonka Diyaaradaha Aden Cade iyo Midaynta Qorshaha Qaranka.
Madaxweynaha oo xariga ka jaray Bangiga Premiere oo bixinaya adeegyo caalami (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarigga ka jaray Bangiga Premiere oo bixinaya adeegyo caalami ah oo aan waddanka horay looga heli jirin.
Madaxweynaha oo Mas’uuliyiinta uga digay inay u doodaan dadka Al-Shabaabnimo lagu tuhmo
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed aysan u doodin dadka lagu tuhmo inay ka tirsan Al-Shabaab inta ay baaristu ku socoto.
Madaxweynaha oo xariga ka jaray Xero lagu tababaro Ciidamada oo ay dhistay Imaaraadka (Sawirro)
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xero lagu tabarayo ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo dawladda Imaaraadka Carabta ka dhistay degmada Hodan ee gobalka Banaadir.
Madaxweynaha oo si kala gaar gaar u qaabilay Danjirayaasha Britain iyo Sweden (Sawirro)
Madaxweynaha oo sheegay in Gobolka Banaadir aan lagu dari doonin wax maamul goboleed ah
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhawaajiyay in Gobolka Banaadir aan lagu dari doonin wax maamul goboleed ah, kadib markii ay soo baxayeen warar sheegayay in Gobolka Banaadir lagu darayo Maamulka Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Madaxweynaha oo sheegay in la xakameyn doono hubka dowladdu leedahay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo xaqiijin lahaa in la helo ciidan qaran oo ay ku jiraan dhammaan dadka Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kale la xakameyn doono hubka dowladdu ay leedahay.
C/salaan Hadliye “Qaxootiga Soomaalida si xoog ah laguma soo celin karo”
Wasiirka Arrimha Dibada Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in dowladda Kenya aysan ku soo wargelin soo celinta qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Ciidanka Amaanka Faray Sugida Amaanka Hetelada
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta dowladda kula hadlay, isagoo ku sugan magaalada Sharma Sheekh ayaa faray Hey’addaha Amniga inay taxadar ka muujiyaan amniga hotelada, xarumaha dowladda iyo goobaha kale ee muhiimka.
R/wasaare Saacid “Waxaan Maanta u Aqoonsanay Maalinta Xuquuqda Aadanaha ee Soomaaliya”
News Report • August 27, 2013
Kulankan maanta ka dhacay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu soo bandhigayey geedi socodka qariirradda Ilaalinta Xuquuqul Insaanka, iyadoo sidoo kalena maanta loo aqoonsaday maalinta Xuquuqul Insaanka Soomaaliya.